Vaovao - Tsy mampiasa kitapo fako mora simba ao an-tranonao ve ianao?
Tsy mampiasa kitapo fako biodegradable ao an-tranonao ve ianao?
Kitapo fako biodegradable dia tena tsara, olona firy no tsy mahalala? Dia fantaro faingana miaraka amiko.
Miaraka amin'ny famoahana ny fandraràna ny plastika, dia mihabe ny firenena toa an'i Angletera, Etazonia sy Aostralia nanomboka nametra ny fampiasana vokatra plastika. Ireo firenena ireo dia manohy mampiasa vokatra biodegradable hanoloana vokatra plastika. Ao anatin'ity politikam-pirenena ity, isika olom-pirenena dia tokony hiara-hiasa amin'ny fampihenana ny fampiasana harona plastika vita amin'ny solika ary hampiasa harona fako biodegradable vita amin'ny masira katsaka sy PBAT.
Misy sehatr'asa fampiharana isan-karazany ao an-trano, valan-javaboary, ary ny birao, ary ny fampiasana isan'andro dia tena lehibe. Ity kitapo fako biodegradable ity dia misy fiasa mitovy amin'ny harona plastika tsotra ihany koa, ary tsy tantera-drano koa izy ary misy rivotra mahomby. Ny kitapo fako biodegradable dia mahazaka ranomaso, manana endrika famolavolana olona, ​​ary azo namboarina amin'ny loko samihafa arakaraka ny filan'ny mpampiasa.
Tsy azo vidiana intsony ireo harona plastika tany am-boalohany. Ity karazana kitapo fako ity dia manana rafitra milamina ary tsy mora simba. Manimba 100 taona na mihoatra ny fahasimbana voajanahary. Raha heverinao fa may ity karazana vokatra plastika ity dia diso ianao. Ny doro tanety dia hamokatra entona misy poizina ary hiteraka fandotoana ny rivotra. Raha tsy fihinanan-kanina ny biby mahafatifaty dia ho faty mosary izy ireo satria tsy azo levonina ny sakaosy fako.
Manana safidy tsara kokoa isika izao, ary afaka mihetsika ny tsirairay. Andao hiara-mividy kitapo fako biby azo ovaina isika. Longjun Tianchun Environmental Protection Co., Ltd. dia nandray anjara lalina tamin'ny indostria nandritra ny folo taona mahery, ary natokana ho an'ny fampandrosoana sy ny famokarana vokatra biodegradable. Manondrana an'izao tontolo izao ny orinasa, mahatratra 50 tapitrisa dolara amerikana ny varotra isan-taona. Manaiky ny serivisy namboarina OEM sy ODM avy amin'ny mpampiasa ihany koa izahay mba hihaona amin'ny filan'ny mpampiasa tsirairay ary hanatsara ny fahafaham-pon'ny mpanjifa.